Ianaro ny fomba hametrahana ny trosan'ny orinasa ho an'ny orinasanao
Ny orinasa Incorporated dia manolotra programa marobe hananganana trosa orinasa. Izahay dia afaka manome anao ny fomba hampisarahana ny trosanao manokana amin'ny orinasanao. Amin'ny alàlan'ny dingam-pandehanay miavaka dia manery ny 4-6 taona ara-dalàna izahay hananganana orinasan-tserasera ary hahazo mari-pankasitrahana hatramin'ny 7 ka hatramin'ny 14 andro fotsiny, mamorona kaonty vaovao momba ny trosa mifototra amin'ny nomeraon-ketra momba ny hetra sy ny fahaizanao mahafeno fepetra.
Raha mila 20,000 400,000 ka hatramin'ny XNUMX $ na mihoatra ianao, dia antsoy na fenoy ny takelaka ankavanana.
Fiantohana anay: Raha manaraka ny fandaharanay izahay ary tsy mahazo trosa anao dia tsy handany vola iray hetsy isan-jato ianao.
Antsoy ny 1-888-444-4812 raha mila fanazavana
Ho fanampin'izay, miaraka amin'ny a Series LLC, afaka manana orinasa iray ny tsirairay ary ny andiany tsirairay dia afaka mametraka profil madiodio samy hafa. Izany dia afaka mampitombo ny habetsaky ny trosa azon'ny isa amin'ny andiany iray nofidinao hamorona.
Noho ny tontolon'ny famatsiam-bola ankehitriny dia tsy manana programa ho an'ireo manana isa FICO latsaky ny 640. Ho an'ireo olona ireo dia anontanio ny momba ny programa fanamboarana trosa.
Azonao atao ny manana ny mombamomba anao noforonina ho anao ary omena fitaovana sy fitaovana enti-mametraka haingana ny trosan'ny orinasa - na asainay manao ny asa rehetra ho anao. Manolotra programa iray izay zahana 95% izahay, mamela ireo manampahaizana manokana momba ny trosa hanao ny asa. Jereo ny programa momba ny trosa rehetra
Makà trosa amin'ny orinasa - Ny fisarahana amin'ny trosanao manokana dia afaka manolotra ireto tombony manaraka ireto:
Fepetra fandoavam-bola tsara kokoa (Net 30 na Net 60)
Fifanarahana amin'ny governemanta
Fanofana fiara tsy misy fiantohana manokana na fanamarinan-trosa manokana
Ny renivohitra fanombohana sy fampivoarana ny asa
Vidiny ambany, avo lenta
Raha vantany vao mametraka ny trosan'ny orinasa ianao dia azo atao ny mahazo:
Lisitry ny trosa sy ny fandoavam-bola tsara kokoa (Net 30 na Net 60)
Rahoviana no hametraka ny trosan'ny orinasa
Tsotra sy tsotra, tianao izany manangana crédit orinasa alohan'ny ilain'ny orinasanao! Tsy misy andrim-panjakana te hampindrana, hiara-miasa na hatoky orinasa tsy afaka manaporofo ny fitoniana ara-bola. Amin'ny maha-tompona orinasa anao dia tokony manomboka mieritreritra ny fananganana tantaram-bola ianao raha vao mampiditra. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fahazoana ny nomeraon'ny D & DUNS anao. Azo atao io dingana io, amin'ny alàlan'ny orinasa iray na orinasam-pifandraisana voafetra (LLC) fotsiny, ary mampiasa ny nomeraonao (EIN).
Rehefa mampiasa ny mombamomba azy manokana ireo tompon'andraikitra sy tompona mba hahazoana trosa na ahazoana carte de crédit ho an'ny orinasa dia atahorany ny mety ho tompon'andraikitra amin'ny tenany manokana, ary ny fanalefahana ny voaly orinasa amin'ny alàlan'ny fifampiraharahana ara-bola. Misy antony roa tokony hiezahan'ny tompona orinasa tsy hampiasa antoka manokana amin'ity toe-javatra ity.
Tompon'antoka ny mpana sonia raha tsy afaka mandoa ny orinasa ny orinasa
Ny trosa azo amin'ny orinasa dia mety hiteraka fanararaotana fananana manokana.
Aza adino, ny laharam-pahamehan'ny trosa arahin'antoka dia mitovy amin'ny fomba mitovy amin'ny isa nomen'ny anao manokana. Izy ireo dia noforonina tamin'ny fampiasana lafin-javatra maro, anisan'izany ny: trosa azo, ny habetsaky ny trosa ampiasaina, ny tantaran'ny fandoavam-bola, ny tantaram-bola ary ny tondro ara-bola maro hafa.
Ny fahazoana tsipika fampindramam-bola ho an'ny orinasa dia dingana iray izay napetraka rehefa mandeha ny fotoana. Arakaraka ny maha-antitra ny orinasa, no betsaka ny safidy tsy maintsy hananganana trosa sy hahazoana indram-bola nefa tsy mampiasa antoka manokana. Ny taona dia mamela orinasa maro haneho ny fitokisany sy ny fitoniana ara-bola, saingy tsy tokony hampiato ny orinasa tanora tsy hanandrana hangataka trosa. Ny fomba tsara indrindra anehoan'ny orinasa tanora ny fahatokisany azy dia ny fanamafisana ny tatitra momba ny trosa D & B.
Manangana trosa orinasa
Ny orinasa Incorporated dia namolavola programa hanomezana ny orinasanao fitaovana hanampiana anao hampisaraka ny orinasanao sy ny volanao manokana. Amin'ny alàlan'ny famoronana mombamomba ny trosa vaovao mifototra amin'ny nomeraon'ny hetra.
Izany dia manomboka amin'ny antsika Fandaharam-pananganana Credit Credit, izay hanangana mombamomba sy isa vaovao. Ny tanjona dia ny fametrahana naoty 75 na tsara kokoa. Raha ampitahaina ny isa 80 dia toy ny fananana naoty 800 an'ny tena manokana: Izany no trosa tsara. Nanangona sy nanolotra izahay, ny rafitra isa momba ny trosa ho an'ireo masoivohon'ny tatitra voalohany.
Ny isa iray amin'ny crédit dia natsangana tamin'ny alàlan'ny fananana lisitry ny trosa, carte de crédit, kaonty ary boky momba ny varotra izay manao tatitra amin'ny biraon'ny trosa. Ho an'ny ankamaroan'ny orinasa dia sarotra be ny mahita mpampindram-bola vonona hanome karazan-trosa betsaka tsy misy antoka manokana raha tsy misy tantaram-trosa teo aloha. Raha manana referansa momba ny varotrao manokana ianao, hiara-hiasa amin'izy ireo izahay hanangana ny isa. Na izany aza, ny ankamaroan'ny orinasa dia mila fanondroana fanampiny momba ny varotra izay manao tatitra amin'ny maso ivoho misahana ny trosa izay hanokatra trosa sy hanomboka hanao tatitra amin'ireo masoivoho lehibe. Na dia mitaky fotoana voalaza etsy ambony aza ny fizotrany, matetika dia maharitra efatra ka hatramin'ny enim-bolana no mila manamarina tsara ny mpivarotra amin'ny maso ivoho.
Manolotra torolàlana momba ny fomba hisafidianana ireo orinasa hanome trosa anao eo noho eo izahay. Ny ampahany amin'ny programa dia manampy anao amin'ny fampiharana sy ny fizotran'ny tatitra ary koa ny fisafidianana orinasa hanomezana voninahitra ny orinasanao. Ireo orinasa miara-miasa aminay dia hitatitra ny traikefa amin'ny fandoavam-bola amin'ny biraon'ny mpampindram-bola - ary hanome indram-bola tsy misy antoka manokana na mila fanamarinana manokana ny trosa.
Vonona ny hamoaka ny trosa ny orinasa satria tsy heverina ho ahiana be ny mpanjifany. Ny antony tsy heverina fa ahiana mafy dia noho ny fanirian'ireo tompona orinasa hanangana ny trosan'ny orinasany amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny programa fananganana trosa orinasa.
Mpikambana ao amin'ny Dun & Bradstreet Credibility Corp.
Nohavaozina farany tamin'ny 11 septambra 2018
FAQ momba ny trosa orinasa
Mametraka ny trosa orinasa ho an'ny orinasanao
Manamboara ny tenanao orinasa
Famaritana mari-pahaizana momba ny trosa
Orinasa mitana ny talantalana miaraka amin'ny trosa arahin'antoka
Credit orinasa sy orinasa orinasa
Isa momba ny trosa
Dun sy Bradstreet Profile
Mombamomba ny mpanoratra momba ny trosa
Orinasa volam-panjakana amidy
Mampiasà orinasa matihanina antitra miaraka amin'ny programa fanampiana ara-bola sy trano
Ny mari-pahaizana momba ny trosan'ny orinasanao
Torohevitra momba ny trosa amin'ny orinasa